U-Uranus Retrograde ngo-2021 kwaye ziziphi iimpembelelo? - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
U-Uranus Retrograde ngo-2021 kwaye ziziphi iimpembelelo kuthi?
I-Uranus retrograde iya kusikelela uninzi lweempawu zodiacac ngomoya wokuzimela. Izimvo ezinobuganga kunye nokuyila kuya kuvela ngeli nqanaba kwaye kunokukuguqula.
I-Uranus iya kuphinda ibuyiselwe eTaurus ukusukela nge-25 kuye nge-1 Disemba 2021 kwaye uninzi lweempawu zodiacac ziya kuziva zinqwenela ukuqala into entsha ebomini babo ngeli xesha. Kwelinye icala, abanye abanye baya kuziva ngathi banamahlwili kwaye banxunguphele ngakumbi phantsi kwempembelelo yamandla achukunyiswe sesi sigaba. Le ntshukumo yeplanethi izisa umnqweno wemingeni emitsha kwaye iyasikhuthaza ukuba silungise iinjongo ezintsha. USusan Taylor utyhila iingcebiso zakhe malunga nokuba ungadlula njani kwesi sigaba siqatha.
U-Uranus retrograde unaliphi ifuthe?
Zithini iziphumo zolu sindiso?
Uqikelelo lweempawu zodiac zeli xesha
Imihla yokubhalwa kwakhona kuka-Uranus isukela nge-25 kaJuni-nge-1 ka-Disemba 2021
I-Uranus iphinda ibhalwe kwakhona malunga neentsuku ezili-155 ngonyaka kwaye iyaziwa ukulahla ukulinganisela kwethu kunye nokugweba ngokupheleleyo. Imfuno yethu yenkululeko kunye nokuzimela ibonakala ngathi iyimfuneko ngeli xesha kwaye akunakubakho ukuyityeshela. Izimvo zethu ziya kuphinda-phinda ukusikhupha kwisiqhelo, kwaye xa u-Uranus ethe ngqo kwakhona, siyakufuna ukuphonononga iihorizons ezintsha.
Yintoni ofanele ukuyiphepha ukuyenza ngeli nqanaba: Ukwenza utshintsho oluninzi ebomini bakho.
Into omele ukuyenza: Thanda iintshukumo zeqela.
imiqondiso yaseTshayina kunye neentsingiselo
I-Uranus retrograde inokusenza azimisele kangako kwaye akafuni kutshintsha. Oko kwathethi, nokuba asiyenzi imisebenzi emitsha, sinokuqhubeka nemisebenzi okanye utshintsho esele lukhona okanye ebesicinga ngalo ixesha elide.
Sikwabona ubudlelwane bethu ngendlela eyahlukileyo enkosi kule planethi. Sisenokungafuni ukubona abantu abathile okanye, ngokuchaseneyo, sive isidingo sokubona abantu abaninzi. Kuxhomekeke ekuhambeni kwezinye iiplanethi, ngamanye amaxesha amava okuqaqamba kwentliziyo okanye iingxabano kunye nokuqhekeka.
Ngeli xesha lide lehlayo, malunga neentsuku ezili-150 zizonke, u-Uranus usimema ukuba siqwalasele ubudlelwane bethu kwiqela kunye nenkululeko yethu. Imibuzo emininzi, ekhokelela kwimfuno yotshintsho kubomi bemihla ngemihla. Utshintsho luvakala kwicala lobuhlobo, kodwa kaninzi nothando.
Kuthekani malunga nokuba iseTaurus?
Uranus Retrograde kwiTaurus; uphawu olugcinayo, lunokukwenza ungabi 'ziintambo' kwaye ulumke ngakumbi malunga notshintsho. Lo mbandela uyakucebisa, kude kube sekupheleni konyaka, ukungazenzisi ngokwakho kuyo nayiphi na imisebenzi emitsha kodwa ukuqhubeka lendlela inye esele ikhutshelwe wena ngaphambili.
Ngothando, le ntshukumo yenza yethu inkanuko ephilayo kunye nombane ngakumbi. Ukuba ulwalamano, ubomi bakho bobulili bunokuba mnandi ngakumbi. Kwelinye icala, ukuba awutshatanga, ekugqibeleni uya kusondela kwinto yeminqweno yethu kwaye ungavuma iimvakalelo zakho komnye umntu.
Ewe kunjalo, ifuthe lesi sigaba linakho ziyahluka ngokwendawo ka-Uranus kwitshathi yakho yokuzalwa. Uyakuziva ngakumbi ukuba u-Uranus wendalo ubalulekile kwitshathi yakho yokuzalwa okanye ukuba u-Uranus uhamba eTaurus kwaye okwangoku wenza umba ngeplanethi kwitshathi yakho yokuzalwa.
umhlaza kunye neepisces zithanda ukuhambelana
Zithini iziphumo ze-Uranus retrograde?
Eli nqanaba linxulumene inkululeko yomntu ngamnye kunye nobudlelwane bethu namaqela abathandekayo. Eli lizwe linokukhokelela ekubeni ubuze ukuba uhamba njani kwindlela entsha. Kuyimfuneko ke ngoko ukuba uthathele ingqalelo utshintsho olwenzeka kubomi bakho bemihla ngemihla nakule mihla. Zibuze ukuba uzisebenzisa njani ezi zixhobo zintsha nokuba uzisebenzisa ngokupheleleyo izinto ezintsha ezinqabileyo.
Kufuneka nathi ulumke ekuphepheni iingxabano kunye nokwahlukana Ngeli xesha, kuba izinto zinokunyuka ngokukhawuleza okukhulu. Kuya kufuneka uphephe ukubeka intliziyo yakho kunye nomphefumlo kubudlelwane obutsha kwaye uthathe ixesha lakho lokuhlalutya iimvakalelo zakho.
Luza kuphatha njani uphawu lwakho lweenkwenkwezi ngeli xesha lokucinga?
Cofa kwifayile yakho ye- uphawu lwe-zodiac Ukufumanisa ukuba iJupiter retrograde ikuchaphazela njani- Lungela kwaye ufumane iziphumo zenye iiplanethi ekubuyiseni kwakhona .
I-Aries ihamba phambili kwabanye abantu kwaye uyazi ukuba ungoyiki kwaye uyile njani. Nangona kunjalo, umqondiso wokuqala kufuneka kodwa ulumke ngabantu abazama ukufikelela phambi kwabo.
Ndikunye no-Uranus retrograde, I-Taurus iba namandla ngakumbi kwaye iziva yomelele. Kodwa ngamanye amaxesha baswela ubhetyebhetye kwaye banokuba ngabaphathi kunye nokulawula.
ISaturn retrograde iya kuthanda phuhlisa umoya weGemini wokuchasana. Ukuthanda kwabo ukucaphukisa kuya kubathintela ekufumaneni iziphumo abazinqwenelayo.
Umhlaza uya kuba njengomntwana kunye nesulky Ngethuba lokuhamba kweeplanethi. Ubudlelwane babo buya kuba nzima kwaye aba bantu baya kufumana kunzima kakhulu ukuya phambili.
I-Uranus ibuyele kwakhona yomeleza amandla kaLeo kwaye isikelela aba bemi ngobushushu obomeleleyo kunesiqhelo. Ukuzimisela kwabo okutsha kunokubakhokelela kwimpikiswano enkulu nabantu abakubo.
Eli nqanaba liya kuba ngu Uxinzelelo kubahlobo bethu beVirgo. Ingqondo yabo egxekayo iya kuphindaphindwa kalishumi kwaye abo babathandayo banokufumana ubunzima kuyo.
I-Uranus retrograde yindlela yeLibra yokwenza jonga iihorizoni ezintsha kunye nokuthatha isimo sengqondo sokuqala kunye nesichukumisayo, kodwa nokuzama amava amatsha.
IScorpio iya kuthanda kunzima ukuveza iimvakalelo zabo kwaye kunokuba nzima ukuqonda ngaphandle kokuqhuma. Lumka kwakhona ngamava amatsha aneziphelo ezingalindelekanga.
Sagittarius uya uzimele ngakumbi ngeli xesha lesigaba kwaye baya kufuna ukuthatha ithuba lokuzimela kwabo ukuze baqalise iihambo ezintsha ngovuyo kunye nethemba.
Ngalo lonke ixesha lokuhlengahlengiswa kwakhona, ICapricorn ayizukuphicotha kwaye ke baya kukufumanisa kunzima ukwenza ngendlela abafuna ngayo. Aba bemi banokuthi barhoxe ngokwabo.
Nanku umntu oziva ekhululekile nge-Uranus retrograde! U-Aquarius uya kuba neembono ezininzi kwaye azive ekhululekile yenza ngobuchule, ubuqalo, kodwa ubumbano.
Lixesha lokuba iiPisces ziye ukumilisela iprojekthi ebisengqondweni yabo ixesha elide. Ewe, intshukumo ebuyiselweyo iya kunika iiPisces ubuchule obukhulu, ke lixesha lokuba uzisebenzise.
Iziphumo ze-Uranus retrograde
Ngaba iliso likaHorus Magical? Ukuba kunjalo, Athini Amandla Awo?
Ingelosi kaRahel Guardian yoBulungisa nozuko
intsingiselo yokubona i-222
Kuthetha ukuthini ukuba yipisces
iphupha lesichazi-magama izinyo eliwayo
Intsingiselo yamanani eengelosi angama-222
ithanda ntoni indoda ye-capricorn emfazini
ulujonga njani uphawu lwakho lwe-zodiac